Maalinta: Ogast 20, 2017
Mashruuca xadhka-goosadka, oo horumarsan sannadihii 37 sano ka hor degmada Alanya ee Antalya laakiin aan loo dhisi karin sababo kala duwan, ayaa la dhammeystirey oo la bilaabay inuu u adeego. Maalinta koowaad ee Alanya Cable Car kaas oo la qaban doono kadib xafladda furitaanka rasmiga ah, [More ...]
Saldhigga Konya YHT, oo uu dhigay Raiisel Wasaaraha Yıldırım, waxaa la filayaa inuu u adeego 3 milyan oo rakaab ah sanadkii. Qoraal qoraal ah oo ay soo saareen agaasinka guud ee tareenka dhulka (TCDD), Konya YHT Station iyo Kayacık Logistics [More ...]
Tareenka ADA, 20 wuxuu duulimaadyadiisa ka bilaabi doonaa Mithatpaşa Railway Station illaa Agoosto. Pistil, “Wadada gobolka ee muujinaya u adeegida udhaxeysa Arifiye-Pendik iyo Pendik-Arifiye ayaa dib loo habeeyay sida Mithatpaşa-Pendik iyo Pendik-Mithatpaşa. Si xushmad leh loogu dhawaaqay shacabka ” [More ...]
Gawaarida tareenka ee Van-Kapıköy, daadadka ka dhashay daadad badan oo daadad wata ayaa ku dhacay tunelada barafka iyadoo ay ugu wacan tahay waxyeelo ka soo gaartey Shil Sida ay sheegayaan wararka la helay; Burbur wadada Van-Özalp [More ...]
Gobolka Uttar Pradesh ee waqooyiga Hindiya, ugu yaraan hal qof oo 23 ah ayaa la dilay mid kalena 81 ayaa la dhaawacay ka dib tareen rakaab ah oo ka tagaya biraha. Gawaarida Utkal Express ee 6 ee Haridwar ilaa Puri waa maxalli [More ...]
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri, “Dalkani waa inuu ku kobco kaliya maaha 80 milyan laakiin sidoo kale loogu talagalay dadka dulman iyo dhibanayaasha adduunka. Waa sida ay u koraan waa xoog Turkey ah. " [More ...]
Konya YHT Station iyo Kayacık Logistics Centre Founded
Isaga oo ka qeyb galaya xaflada furitaanka ee Konya YHT Station iyo Kayacık Logistics Center, Raiisul wasaare Binali Yıldırım ayaa sheegay in Konya uu Konya ka dhigi doono magaalo ka wanaagsan tii shalay la maalgashade adag iyo shaqooyin joogto ah. Caasimada Seljuk [More ...]
3. 10 kun rakaab ah oo ku yaal garoonka diyaaradaha ee 200
Hüseyin Keskin, madaxa fulinta ee howlgalada garoonka diyaaradaha İGA Airport, wuxuu cadeeyay inay ku shaqeynayaan duruufo kaladuwan oo loogu talagalay 3 29 qorsheysan furitaanka 2018 October 200. [More ...]
Maanta taariikhda: 20 August August 1927 Dhismaha Kutahya-Balıkesir ...
Taariikh 20 August 1927 Dhismaha Kutahya-Balıkesir ayaa ka bilowday Kutahya. 29 waxay bilowday Bishii 11aad ee Balikesir.